apple ipad air 4 vs ipad air 3: unofanirwa kukwidziridza?
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPad Air 4 vs iPad Mhepo 3: Unofanirwa kukwidziridza?
With Apple & apos; s itsva iPad Air 4 (2020) yemitambo inozivikanwa yekunze nekunze kukwidziridzwa pamusoro pe2019 iPad Air 3, mubvunzo unonzwisisika kuzvibvunza ndewekuti 'Ndinofanira kukwidziridza here?' kana iwe uri wekupedzisira.
Let & apos; s enzanisa iyo nyowani 2020 Apple iPad Air 4 neyakaitangira, iyo 2019 iPad Air 3, uye uone kana iyo nyowani ichinyatso kupa zvakakwana kupa chikonzero chekuvandudza.Tenga iyo nyowani Apple iPad Air 4 (2020) kubva kuApple.com
iPad Air 4 vs iPad Mhepo 3: Dhizaini uye kuratidza mutsauko
iPad Air 3 dhizaini uye mavara (kuruboshwe) vs. iPad Air 4 (kurudyi)
Sezvo vazhinji makuhwa anga ataura, iyo iPad Air 4 inouya zvechokwadi mune yazvino nyowani dhizaini, yakafanana neiyo iPad Pro. Inosanganisira zvidiki zvidiki, zvakaenzana matema bezels, nepo iyo iPad Air 3 ichiri iine hombe chirebvu nehuma.
Ipo iyo 2019 iPad Air 3 mitambo ine 10.5-inch kuratidzwa pane resolution ye 2224 x 1668 pixels, iyo nyowani 2020 iPad Air 4 ine hombe uye yakapinza 10.9-inch 2360 x 1640 kuratidza. Ose maPads anotsigira Chokwadi Tone.
Iyo iPad Air 4 & apos; s kamera huru inogona kupfura vhidhiyo pa4K, 60 FPS Iyo nyowani iPad Mhepo & apos; s kamera huru yakafanana neiya inowanikwa pane iyo Pro Pro, 12-megapixel, uye inogona kupfura 4K vhidhiyo pamafuremu 60-per -second (FPS). Yayo yekumberi Facetime kamera inokwanisa HD vhidhiyo kutora (1080p) uye Smart HDR. Iyo iPad Air 3 inooneka yekudzikisira, sezvo yayo 8-megapixel main kamera inogona chete kupfura 1080p vhidhiyo pa30 FPS pachayo. Iyo selfie kamera paMhepo 3 yakafanana zvikuru neiyo iri pamuenzaniso mutsva, zvakadaro, saka haisi & apos; ichave iri yekuvandudza inowoneka.
Ipo iyo iPad Air 3 iine ma speaker maviri kudivi rimwe chete rehwendefa, nekudaro isingagadzire chaiyo stereo chiitiko kune mushandisi, iyo nyowani iPad Air 4 ine mutauri wega wega akaiswa parutivi rwakasiyana rwepiritsi. Nezvo, mumamiriro emamiriro ekunze vashandisi vanogona ikozvino kunakidzwa nezwi rechokwadi redhiyo kana vachiona mabhaisikopo uye vachitamba mitambo paMhepo 4.
Gamers paIpad Mhepo 3 vari pakaipisisa, senge mumitambo mizhinji yevakawanda, yakadai sePubG Mobile, zvakakosha & kugona kugona kunzwa kuti ndepapi kuputika nepfuti kuri kubva, semuenzaniso.
Bata ID pane iyo iPad Mhepo 4 yakave yakabatanidzwa mubhatani rayo repamusoro Sezvatareva, dhizaini yekuvandudza iyo iPad Air 4 pamusoro peyakatangira haigone & apos; Kana iwe uchida yazvino-inotaridzika uye inonzwa iPad, iyo iPad Air 4 ndiyo yako. Yake yakaenzana slim bezels, nyowani yepamusoro bhatani iyo inosanganisira yakasanganiswa Touch ID, uye chokwadi chekuti iyo Nyowani nyowani ine USB Type-C chiteshi pachinzvimbo cheMheni inoita kukwidziridzwa kwariri kubva kuPad ​​Air Air 3 pasina mubvunzo kukosha kwayo.
Iyo iPad Air 4 (kurudyi) inotsigira Apple & apos; s Mashiripiti Khibhodi uye Apple Penzura 2 Vashandi vePad iPad vanozofara kuziva kuti iyo itsva 2020 iPad Air 4 ine rutsigiro rweApple Magic Khibhodi uye yechipiri chizvarwa Apple Penzura. Nekudaro, iyo yekare 2019 iPad Air 3 inongotsigira iyo yekutanga chizvarwa Apple Penzura uye maererano neyekutanga-bato kiyi - yakanyanya kuomarara Apple Smart Khibhodi.
Uye zvakare, nekuda kweiyo nyowani iPad Air 4 ine USB Type-C chiteshi pachinzvimbo cheMheni, inogona kuita data kuchinjisa kusvika kumashanu magigabiti pasekondi, inova yakapetwa ka10 kupfuura iyo iPad Mhepo 3. Iyo USB Type-C chiteshi pane iyo modhi nyowani inobvumidza iyo kubatana nyore nemakamera, ekunze madhiraivha uye ekunze monitors (kusvika kusvika 4K resolution).
iPad Mhepo 4 vs iPad Mhepo 3: Kuita musiyano
Nepo kukwidziridzwa kwekuita kwaitarisirwa kune nyowani iPad Air 4 pamusoro payo & apos; ane gore -mberi akafanotangira, it & apos; s yakakomba kusvetuka kumberi. Iyo nyowani 2020 iPad Air 4 iri mitambo Apple & apos; s yakanyanya kumberi chip kusvika parizvino - iyo A14 Bionic, ichiita mashandiro ayo 40% nekukurumidza kupfuura iyo yePad Air Air 3.
Nekudaro, iyo Air 4 inonyanya kuratidza ramangwana-chiratidzo, uye inokwanisika kumabasa ehunyanzvi sekugadzirisa vhidhiyo, kugadzirwa kwemimhanzi uye nezvinodiwa. Iyo iPad Air 4 zvakare inokwanisa makumi matatu% nekukurumidza kugadzirwa kwemifananidzo pamusoro peMhepo 3, inozonyanya kuoneka kune ma gamers nevhidhiyo edhita.
iPad Air 4 vs iPad Mhepo 3: Unofanirwa kukwidziridza?
Nepo yapfuura iPad Mhando mamodheru zvaive zvisina & apos; izvo zvakasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe nemumwe, iyo nyowani 2020 iPad Air 4 ndiyo huru kusvetuka kumberi, uye inofanirwa zvirokwazvo kukwidziridzwa. Kana iwe & apos; uri nyanzvi inoda yepamusoro maspec, kana kunyangwe iwe & apos; tichingoshandisa yako iPad yekutarisa mafirimu uye YouTube mavhidhiyo, iwe uchaona kuti iyo nyowani modhi inokupa iwe iri nani iri nani chiitiko.
Asi, kana iwe uchitova neako iPad Air 3 yakamisikidzwa nekhibhodi uye yechizvarwa chekutanga Apple Penzura, uye zvakadaro aren & apos; haugutsikane zvizere kuti chero eakakwidziridzwa pamusoro apa anofanirwa kutanga kwese - kuwana nyowani keyboard nepenzura pa pamusoro peiyo nyowani iPad - ipapo unogona kunge wakangonaka neako 2019 iPad Mhepo. Icho & apos; ichiri chigadzirwa chitsva chichave chiri kuwana zvigadziriso zvemakore anouya.
Iwe unogona zvakare kuwana zvichibatsira
iPad Mhepo 4th gen, iPad 8th gen ikozvino zviri pamutemo: Inokurumidza uye flashier kupfuura nakare kose
Uyai nepati chero kwaunoenda neiyo Sony SRS-XB43 Inotakurika Bluetooth Mutauri
Deal: Samsung Gear Fit2 Pro iri kutengeswa ye $ 130 pa Best Buy, ponesa 22%!